တရုတ်ကုမ္ပဏီက ဘဲလ်ဂရိတ်-ဘူဒါပတ်စ် ရထားလမ်း၏ ၁၀၈ ကီလိုမီတာရှည်သောရထားလမ်းပိုင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း စတင် - Xinhua News Agency
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ Kiskunhalas မြို့ရှိ ခေတ်မီ ဘူဒါပတ်စ်-ဘဲလ်ဂရိတ် ရထားလမ်း၏ ဟန်ဂေရီရထားလမ်းပိုင်း ဖောင်ဒေးရှင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအတွင်း ရထားလမ်းဟောင်းများအား ဖယ်ရှားနေသော အလုပ်သမားများအား အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နိုဗီဆတ်၊ ဆာဘီးယား၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဆာဘီးယားနိုင်ငံရှိ ဘဲလ်ဂရိတ်-ဘူဒါပတ်စ် ရထားလမ်း၏ လမ်းပိုင်းသစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအား နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်၌ စတင်ခဲ့သည်။ ဆာဘီးယားနိုင်ငံ နိုဗီဆတ်မြို့တွင်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ ဆာဘီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ Aleksandar Vucic ၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးရာနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Peter Szijjarto နှင့် ဆာဘီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Chen Bo တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဆာဘီးယားနိုင်ငံ Stara Pazova မြို့ရှိ ဘဲလ်ဂရိတ်-ဘူဒါပတ်စ် ရထားလမ်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Dimitrije Goll/Serbian President’s Office/Handout via Xinhua)
ဆာဘီးယားနိုင်ငံ Stara Pazova မြို့ရှိ ဘဲလ်ဂရိတ်-ဘူဒါပတ်စ်ရထားလမ်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Dimitrije Goll/Serbian President’s Office/Handout via Xinhua)
ဆာဘီးယားနိုင်ငံ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ရှိ ဘဲလ်ဂရိတ်-ဘူဒါပတ်စ် မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အား မတ် ၂၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ Kiskunhalas ရှိ ခေတ်မီ ဘူဒါပတ်စ်-ဘဲလ်ဂရိတ် ရထားလမ်း၏ ဟန်ဂေရီလမ်းပိုင်း ဖောင်ဒေးရှင်းခင်းခြင်း အခမ်းအနားအတွင်း ရထားလမ်းဟောင်းများ ဖယ်ရှားနေသည့် အလုပ်သမားများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နိုဗီဆတ်မြို့မှ North Serbia ရှိ Kelebija နယ်စပ်အား ဖြတ်သန်းသွားသည့် မြန်နှုန်းမြင့် ရထားလမ်း၏ ၁၀၈ ကီလိုမီတာရှည်လျားသော ရထားလမ်းပိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား Vucic ၊ Szijjarto ၊ Chen Bo နှင့် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတို့က ခလုတ်နှိပ်ကာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရထားလမ်းပိုင်းတွင် မြေအောက်ရထားလမ်းများ၊ မိုးပျံရထားလမ်းများနှင့် အခြားအခြေခံအဆောက်အအုံများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ပြောကြားရာတွင် Vucic က ဆာဘီးယားနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ရထားလမ်းက အရေးပါပုံအား အလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံနှစ်ခုလုံးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံရေးအား ချီးကျူးပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒါကို ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်နှစ်သက်မှုရှိပြီး ဒီရထားလမ်းကနေ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့်၊ လစာတွေနဲ့ ပင်စင်ခံစားခွင့်တွေ၊ လူနေမှုစံနှုန်းမြင့်မားမှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ် စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရထားလမ်း၏ ဆာဘီးယားနိုင်ငံဘက်ခြမ်းသည် သုံးနှစ်အတွင်း ပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်း Vucic က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရှိ ကီလိုမီတာ ၁၆၇ ရှည်လျားမည့် ရထားလမ်းပိုင်းကိုမူ ၂၀၂၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ ပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်း Szijarto က ကြေညာခဲ့သည်။
ဘဲလ်ဂရိတ်-ဘူဒါပတ်စ်ရထားလမ်းသည် စုစုပေါင်း ကီလိုမီတာ ၃၅၀ ရှည်လျားပြီး ဆာဘီးယားနိုင်ငံနှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရှိ မြို့တော်များအကြား ပြည်သူများနှင့် ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုခရီးကြာချိန်အား ၂ နာရီခန့်သာရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း Vucic က ရှင်းပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံနှင့် ဆာဘီးယားနိုင်ငံတို့သည် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံတွင် လူနေမှုဘဝစံချိန်စံနှုန်းများ မြှင့်တင်ရာတွင် အထောက်အကူပြုမည်ဟု ယုံကြည်သဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း Szijarto က အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင် (NDRC) လက်ထောက်အကြီးအကဲ Ning Jizhe က ဘဲလ်ဂရိတ်-ဘူဒါပတ်စ်ရထားလမ်း တည်ဆောက်မှုတွင် တိုးတက်မှုအပေါ် နှစ်နိုင်ငံအား ဂုဏ်ယူကြောင်း ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုစီမံကိန်းသည် “တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဥရောပ အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံများ (CEEC) အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အထင်ကရစီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဥရောပသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်္ကြံနှင့် တရုတ်-ဥရောပ ကုန်းနှင့် ပင်လယ် အမြန်လမ်းကြောင်း၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု”လည်း ဖြစ်သည်။
“ဒါဟာ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမအဆိုပြုချက်နဲ့ ဥရောပဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာများနှင့် ၎င်း၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဆီ ကြီးမားသော အရေးပါမှုဖြစ်ပါတယ်” ဟု Ning က ဆိုသည်။ “ဆာဘီးယား-ဟန်ဂေရီရထားလမ်း တည်ဆောက်ခြင်းဟာ တရုတ်၊ ဆာဘီးယားနဲ့ ဟန်ဂေရီ၊ CEE နိုင်ငံအားလုံးနဲ့ ဥရောပတစ်ခုလုံးထံ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဆောင်ယူလာပေးပါလိမ့်မယ်”
လက်ရှိတွင် ရထားလမ်းတည်ဆောက်မှုပြီးစီးပါက ဆာဘီးယားနိုင်ငံရှိ ရထားလမ်းပိုင်းတစ်ခုလုံးသည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၁၆၀ အထိ ပြေးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
NOVI SAD, Serbia, Nov. 22 (Xinhua) — Construction began onanew section of the Belgrade-Budapest railway in Serbia ataceremony on Monday. Attended by Serbian President Aleksandar Vucic, Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto, and Chinese Ambassador to Serbia Chen Bo, the ceremony took place in Novi Sad, Serbia.
“We will enjoy this, and it will bring benefits both through construction and through higher salaries and pensions,ahigher standard of living, andabetter future for our children,” he said.
Inaspeech throughavideo link, deputy head of China’s National Development and Reform Commission (NDRC) Ning Jizhe congratulated both countries on their progress in the construction of the Belgrade-Budapest railway.
He said it was “a flagship project of the cooperation between China and Central and East European countries (CEEC), and an important part of the European transport corridor and the China-Europe Land and Sea Express Route.”
“This is of great significance to the Belt and Road Initiative and its coordination with European development strategies,” Ning said. “Building the Serbia-Hungary railway will bring benefit to China, Serbia, and Hungary, to all CEE countries, and the whole of Europe.”
1- Workers remove the old rails during the foundation stone laying ceremony for the Hungarian section of the modernization of Budapest-Belgrade railway in Kiskunhalas, Hungary, on Oct. 15, 2021. (Xinhua/Attila Volgyi)
2- Photo taken on May 30, 2020 shows the construction site of the Belgrade-Budapest railway in Stara Pazova, Serbia. (Dimitrije Goll/Serbian President’s Office/Handout via Xinhua)
3- Workers are seen at the construction site of the Belgrade-Budapest railway in Stara Pazova, Serbia, May 30, 2020. (Dimitrije Goll/Serbian President’s Office/Handout via Xinhua)
4- Photo taken on March 25, 2021 shows the construction site of the Belgrade-Budapest high-speed railway in Belgrade, Serbia. (Xinhua/Wang Wei)
5- Workers remove the old rails during the foundation stone laying ceremony for the Hungarian section of the modernization of Budapest-Belgrade railway in Kiskunhalas, Hungary, on Oct. 15, 2021. (Xinhua/Attila Volgyi)